Qoorqoor oo soo gabagabeynaya doorashada Golaha shacabka | KEYDMEDIA ENGLISH
Qoorqoor oo soo gabagabeynaya doorashada Golaha shacabka
Maamulka Galmudug, ayaa ku dhawaaqay jadwalka doorashada, saddexdii kursi ee ugu danbeysay Gaalkacoyo, taas oo ka dhigan in Qoorqoor ka soo baxay ballantii soo af-meeriddda doorashooyinka ee maalim kadib.
Gaalkacyo, Soomaaliya - Guddiga Hirgalinta doorashooyinka heer Galmudug, aya ku dhawaaqay in Saddexda kursi ee ugu danbeeya kuraasta talla Gaalkacyo, la dooran doono, Talaadada 15 March, oo berri ku beegan.
Guddiga Doorashada Galmudug, waxa ay markii ugu horreysay, isku mar shaaciyeen, liiska Guddiga soo xulista Ergada saddexda kursi iyo jadwalka doorashada, taas oo ka dhigan in Axmed Qoorqoor, doorashada soo gabagabeyn doono, xiligii loo qorsheeyay.
Saddexda kursi ee baaqiga, ayaa kala ah; HOP#018, HOP#021 iyo HOP#020, waxaana baarlamaankii 10-aad, ku kala fadhiyay, Qaasim Maxamed Jaamac, Maryan Xaji Cabdi, iyo Cali Axmed Shariif Cismaan, hadba sida ay u kala horreeyaan.
Galmudug, waxa ay dooratay, 34 kursi, oo Golaha Shacabka ah, iyo 8 kursi, oo Aqalka sare ah, waxaana ku dhimana kaliya, saddexdaan kursi, kuwaas oo doorashadoodu culeys weyn ka dul qaadi doonto Madaxweynaha maamulkaas, Qoorqoor.
Illa hadda, waxaa la doortay 225 kursi oo Golaha shacabka ah, kuwaas oo 45 kursi dumar yihiin, xilli ay xusid mudan tahay in ay jiraan saddex kursi oo guddiga heer federal ku dhaggan yihiin, waxaana wali baaqi ah, 50 kursi.
Qoondadii haweenka ee boqolkiba saddon, ayaa ceel dheer ku dhacday, waxaana ilaa hadda la doortay 20%, taas oo la micno ah in aan la heli doonin, qoondada rasmiga ah, guud ahaa, Boqolayda kuraasta la doortay waa 81.8%.
Haweenka ayay ahayd in ay helaan 82 kursi, hayeeshee, sida wax ku socdaan, waxa ay kal-doorasheedkaan lumin doonaan ku dhawaad 20 kursi, taas oo meesha ka saareysa baaqyadii muddada soo socday ee dibad iyo gudaba lahaa.
Maamulka Koofur galbeed, ayaa dhankiisa la filayaa in ay berri soo dhamaystiraan, kuraasta Golaha shacbaka, taas oo ka dhigan in Galmudug, Soomaaliland, Banaadiriga iyo Koofur Galbeed, ku baaseen imtixaankii 15 March 2022.
Jubaland, waxaa ka taagan kala aragti duwanaan xoogan, oo u dhaxeysa Garbahharrey iyo Kismaayo, taas oo salka ku heysa, xasarado qabyaaladeed oo Farmaajo ka abuuray gobolka iyo iska hor keenidda bulshada Gedo iyo Axmed Madoobe.
Puntland, dhankeeda lix kursi, ayaa wali baaqi ku ah, waxaana dhamaan lixdas lagu dooran doonaa Garowe, haka doorashada kuraasta Hirshabeelle, ee taalla Baladwene, ay lugaha ku dhaggan tahay Villa Somalia, iyadoo adeegsaneysa Yuusuf Dabageed.